အရိပ်ချစ်: အံသြဖွယ်ရာ သခွားသီး အစွမ်းများ ..
အံသြဖွယ်ရာ သခွားသီး အစွမ်းများ ..
အားလုံးကို ပေးစွမ်း နိုင်ပါတယ်။ သခွားသီး တစ်လုံးမှာ ဗီတာမင် ဘီဝမ်း၊ ဘီတူး၊ ဘီသရီး၊ ဘီဖိုက်၊ ဘီဆစ်၊ ဖော်လစ် အက်ဆစ်၊ ဗီတာမင်စီ၊ ကယ်လ်ဆီယမ်၊ သံဓါတ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ဖော့စဖရပ်၊ ပိုတက်စီယမ်နဲ့ ဇင့်ဓါတ်တွေ ပါဝင် ပါတယ်။
နေ့လည် နေ့ခင်း မောပန်း နွမ်းနယ်နေရင် ကဖင်းဓါတ် ပါတဲ့၊ ဆိုဒါပါတဲ့ အရည်တွေ မသောက်ပါနဲ့။ သခွားသီးဟာ ဘီတာမင် ဘီနဲ့ ကစီဓါတ်များစွာ ပါဝင်တာကြောင့် မြန်မြန် လန်းဆန်းမှုကို ရစေပါတယ်။
ရေချိုးခန်းထဲက ကြည့်မှန်ဟာ မကြည်လင်၊ ဖုန်တင်နေပါသလား။ သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး ကြည့်မှန် ပေါ်မှာ သုတ်ပေးပါ။ ဖုန်မှုန့်တွေ ကင်းစင် သွားတဲ့အပြင် ကြည်လင်ပြီး မွှေးပျံ့တဲ့ ရနံ့တစ်မျိုးကို ခံစားရစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုးကောင်ပိုးမွှား၊ ပက်ကျိတွေ ပန်းခင်းထဲမှာ လျှောက်ဖျက်ဆီး နေပါသလား။ ဒါဆိုရင်တော့ သခွားသီး စိတ်လေး တွေကို သံဘူးထဲ ထည့်ပြီး ပန်းခြံထဲမှာ ထားလိုက်ပါ။ သခွားသီးမှာပါတဲ့ ဓါတ်ပစ္စည်းဟာ သံဘူးထဲမှာ ပါတဲ့ အလူမီနီယံနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး လူသားတို့ ခံစားသိရှိခြင်း မရှိနိုင်ပဲ ပိုးမွှားများအား ထွက်ပြေး စေသည့် ရနံ့အား ထုတ်လွှတ် ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
အရေပြား မှာရှိတဲ့ အဆီတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အမြန်နည်းကို လိုချင်ပါသလား။ သခွားသီး ကွင်းနဲ့ အဆီများတဲ့ နေရာတွေကို မိနစ် အနည်းငယ်လောက် ကြာကြာ ပွတ်သပ်ပေးပါ။ သခွားသီးမှာ ပါတဲ့ phyto ဓါတ်တုပစ္စည်းဟာ အရည်ပြားကို တင်းရင်းစေပြီး အပေါ်ယံလွှာကို ကျစ်လစ်စေကာ အဆီတွေကို လျော့ပါး စေပါတယ်။ ပါးရည် တွန့်ခြင်း ကိုလည်း ထိရောက်စွာ ကုသ ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုးဝါးသော ခေါင်းကိုက် ဝေဒနာကို သက်သာ လိုရင်တော့ အိပ်ယာဝင်ခါနီးမှာ သခွားသီး အနည်းငယ်ကို စားပြီးမှ အိပ်ယာဝင်ပါ။ အိပ်ယာထ လာတဲ့ အခါမှာ ခေါင်းကိုက် သက်သာပြီး လန်းဆန်းမှုကို ခံစားရနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သခွားသီးမှာ သကြားဓါတ်၊ ဗီတာမင်ဘီ၊ လျှပ်လိုက်ရည် စတာတွေ ပေါကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အဟာရ ဓါတ်တွေကို ပြန်လည် ဖြည့်တင်းပေးကာ အားလုံးကို သမမျှတ နေစေပြီး ခေါင်းကိုက် ခြင်းကို သက်သာ စေပါတယ်။
တံခါး ပတ္တာက အသံ တကျွိကျွိ မြည်နေပါသလား ဒါဆိုရင်တော့ သခွားသီးကို ကွင်းပြီး အသံမြည် နေတဲ့ ပတ္တာကို ပွတ်ပေးပါ။ တကျွိကျွိ မြည်သံ ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ်။
သခွားသီးကို လှီးပြီး ရေနွေး ဆူဆူထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ သခွားသီးမှာပါတဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေ၊ အဟာရတွေဟာ ရေနွေးနဲ့ ဓါတ်ပြုပြီး ထွက်လာတဲ့ ရေနွေးငွေ့ဟာ ပင်ပန်း မှုကို ပျောက်စေတဲ့ ရနံ့ဖြစ်ပြီး မီးဖွားပြီးစ မိခင်တွေနဲ့ အတန်းတင် စာမေးပွဲကို ဖြေရမယ့် ကောလိပ် ကျောင်းသားေ တွကို စိတ်ပင်ပန်း ဖိစီးမှု လျှော့ကျ စေပါတယ်။
အစားအစာ စားပြီးလို့ ခံတွင်းနံ့ပျောက်အောင် ဝါးစရာ ပီကေ ဒါမှမဟုတ် အခြားအရာတွေ မရှိဘူး ဆိုရင်တော့ သခွားသီးကို ပါးပါးလှီးပြီး အာခေါင်မှာ လျှာနဲ့ဖိပြီး စက္ကန့် ၃ဝ လောက် ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ပါးစပ်ထဲက ခံတွင်းနံ့ဆိုးခြင်းကို ဖြစ်ပွားစေသော ဘက်တီးရီးယားတွေကို သေဆုံး သွားစေပါတယ်။
ဘုံပိုင်ခေါင်း၊ ရေဇလုံ၊ စတီးပစ္စည်း စတာတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ အစိမ်းရောင် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေ နေပါသလား။ သခွားသီးနဲ့ ပွတ်သပ် ပေးလိုက်ပါ။ သန့်ရှင်း တောက်ပြောင်စေနိုင်ပါသည်။ အစင်းရာတွေလည်း မကျန်ခဲ့စေပါ။ လက်နဲ့ လက်သည်း တွေကိုလည်း မထိခိုက်စေပါ။
ဖောင်တိန်သုံးပြီး အမှားရေးခြစ် မိပါသလား။ သခွားသီး အသားလေး အနည်းငယ်နဲ့ ဖြည်းဖြည်းလေး ပွတ်တိုက် ပေးပါ။ ဖောင်တိန်မှင်တွေကို ဖျက်ပေး ပါလိမ့်မယ်။ ရောင်စုံခဲတံ၊ မာဂါ စတာတွေကိုလည်း ဖျက်လို့ ရပါတယ်။
Written by အာယု
အေးချမ်းမွန်မှ မြ၀တီ တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Photo From : မြ၀တီ
Posted by Ayeit Chit at 08:48
ဒေါသ ကင်းရေး (၁၀) ချက်ဆေး
ဝမ်းဗိုက်ချပ်ရပ်လိုသူတိုင်း ဆောင်သင့်၊ ရှောင်သင့်ေ...
< နှောင်း နောင် တ >
ချစ်ခြင်း = ခွင့်လွတ်ခြင်း
"ဒေါသ၀င်လာရင် ဖြေဖျောက်နည်း (၁၁)နည်း"
ငါ နင့်ကို ရင်နင့်အောင် ဆက်၍ချစ်နေမယ်...
“ ပေးဆပ်ခြင်းရဲ့ မွန်မြတ်မှု ”
ကျွန်စိတ် နှင့် သခင်စိတ်
၂၀၁၃ ခုနှစ်ကို ကြိုဆိုရင်း ဖွင့်လှစ်ကြစို့..
ပြင်ဆင်သင့်တဲ့ အလုပ် တစ်ခုခု သို့မဟုတ် အဖြေရှိအောင...
နင်သာ ငါ့ကို တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် .
ကိုယ်ခံစွမ်းအား ကောင်းစေမည့် နည်းငါးသွယ်...
ယခုချက်ချင်း စိတ်ခံစားမှု ကောင်းမွန်လာစေမည့် နည်းသံ...
ခက်ခဲတဲ့ခရီးကို ဖြတ်ကျော်နိုင်မှ လူစွမ်းကောင်း ခေ...
ကိုယ့်ရဲ့ ကံ ကိုယ့်စီပြန်
Young Buddhist's Association's photo.
ဝဋ် ၃ ပါး
အချစ်ကြီးသူက အမြဲတမ်း တပမ်း ရှုံးတယ်
ရေနွေးကြမ်း နှင့် နှလုံးခုန်ရုတ်တရက် ရပ်တန့်ခြင်း
အမျိုးသမီးများကို ဝမ်းဗိုက်နာကျင်စေသော အကြောင်းရင်...
ဘ၀ရဲ့အကောင်းဆုံးအိမ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး တည်ဆောက်နေသူ...
မိန်းမသားများ အောင်မြင်ခြင်း အကြောင်းတရား
အသိဥာဏ် ရှိတဲ့ အချစ်၊ အသိဥာဏ် မရှိတဲ့ အချစ်
ပိုက်ဆံမရှိသော်လည်း လှူဒါန်းနိုင်သော အလှူ (၇) မျို...
“မြင့်မြတ်သောစိတ်ဓါတ် နှင့် နေ့စဉ်ဆုတောင်း”
အာရောဂျပရမာ လာဘာ၊ သန္တုဋ္ဌိပရမံ ဓနံ။ ၀ိဿာသပရမာ ဉာတိ၊...
" မြန်မာတို့အတွက် ကဗျာတစ်ပုဒ် " - မင်းသုဝဏ်
ဘာ့ကြောင့်လဲ မသိဘူးဟာ ခုတလော နင့်ကို ခဏခဏ လွမ်းတယ်...
Health Articles's photo.
“ သင်လုပ်ခဲ့သမျှဟာ သင့်ထံ ပြန်လာလိမ့်မယ် သင်ကောင်း...
မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော်၏ နံနက်ခင်းသြဝါဒ (ဝိပဿနာမျက်လုံးေ...
Words of Buddha's photo.
တခါတခါ နင့်ကြောင့် အပြစ်မရှိတဲ့ အချစ်ဆိုတာကို ငါ မ...
လူ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းများ၏ အလုပ်လုပ်ချိန်ဇယား...
Heart Canteen's photo.
MegaTypers.com မှာ ငွေတွင်းရှိတယ်